Ururka Taliban oo ku dhawaaqay Hogaamiye cusub, kadib dilkii Hogaamiyahoodi hore – STAR FM SOMALIA
Ururka Taliban oo ku dhawaaqay Hogaamiye cusub, kadib dilkii Hogaamiyahoodi hore
Bayaan lagu qoray luuqadda Pashto oo kooxda ay baahisay maanta ayay sidoo kale si rasmi ah ugu qirtay in Mansoor lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan cidna wadin oo Mareykanka uu lee yahay.
“Mawlawi Haibatullah Akhundzada ayaa loo magacaabay hoggaamiyaha cusub ee Taliban kadib markii ay si buuxda isugu raaceen golaha shuurada ee kooxda” ayaa lagu yiri bayaanka Taliban.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Isniintii xaqiijiyey in Mansoor la ciribtiray sababta oo ah waxa uu caqabad ku ahaa hanaanka nabadda iyo dib u heshiisiinta Afghanistan.
Hoggaamiyaha cusub ee Taliban ayaa waxa uu ku xigeen u ahaa Mansoor isaga iyo Sirajuddin Haqqani oo ah hoggaamiyaha shabakadda Haqqani.
Haqqani ayaa xilkiisa sii hayn doono, halka wiilka aas-aasihii kooxda Mullah Yaqoob loo magacaabay inuu noqday ku xigeenka hoggaamiyaha cusub.
40 ruux oo lagu dilay weerar is qarxin ah oo ka dhacday magaalada Cadan